ဇာတ်လိုက်ကတော့ တတိယကြယ်ပါပဲကွယ် :D
၁- ကြယ်ရှင်အစစ်အမှန်မရောက်သရွေ့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာ မျက်နှာများတာမှမဟုတ်တာ ။
ကိုယ့်ကိုစိုးမိုးတဲ့သူ ၊ ကိုယ်ကတွယ်တာတဲ့သူ နဲ့ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတဲ့.....း)
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းကင်မှာ ထွန်းလင်းနေတဲ့ ကြာသပတေးကြယ်လေး
ကြယ်ကလေးတွေချစ်စရာ အပြာရောင်ကောင်းကင်မှာ သူတို့ကို တစ်လုံးချင်း ပြုံးရင်းကြည့်နေပါ...
အကြံပေးတာ မဟုတ်ဘူးနော ဒေါ်မိုးငွေ့...ဆရာငြိမ်းရဲ့ သီချင်းဆိုကြည့်တာ...း)
တတိယကြယ်လေး ကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီဖြူနဲ့ ဘုရားလှူတယ်ဆိုတော့...လက်တွဲဖော်ဟာလည်း :)
တတိယကြယ်လေး နှစ်သက်တဲ့ နှင်းဆီပန်းဖြူဖြူလေးကို ဘုရားလှူတယ်ဆိုတော့... ဖူးစာရှင်ဟာလည်း <>
မမိုးရေ Adora ဘဝမှာလဲ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကစပြီး အီစီကလီလုပ်မိသူအလည် ကြိုက်မိသူအဆုံး အားလုံးကြာသာပတေးပဲ။
၁. မျက်နှာများတတ်သူလို့မထင်ပါ..
၂.သူမကို အချစ်ဆုံးက ပထမကြယ်လို့ထင်ပါတယ်...
၃.သူမ အချစ်ဆုံးက ဒုတိယကြယ်လို့ထင်ပါတယ်...
၃.နောက်ဆုံးမှာ သူမရဲ့လက်တွဲဖော်အဖြစ် တတိယကြယ်ကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..
ဒါတော့ တရားလွန်တာပေါ့ နော် ။
အခုမှ သီတင်းက ကျွတ်မို့ပဲ ရှိသေးတယ်
လာပြီးတော့ ရွေးချယ်ခိုင်းနေဘီ :P ။
၁) မိန်းကလေးတိုင်း အဲ့လိုတန်းစီပြီး ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါကို မျက်နှာများတယ်လို့ နာမည်တပ်မယ်ဆိုလည်း အင်း.. များတယ်ပေါ့ :D
၃)ဒုတိယကြယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တတိယကြယ်များ ဖြစ်နေမလား???
တတိယကြယ်လေးကို ရွေးချယ်လိုက်တာပဲ။ မချစ်ဘဲနဲ့တော့ သူကြိုက်တဲ့နှင်းဆီဖြူတွေလှူပြီး ဘုရားမှာ တောင်းဆုပြုပေးမှာ မဟုတ်ဘူးမမ။
အဲ မျက်နှာများတယ်လို့ မထင်ဘူး
ကြယ်သုံးကြယ်လုံး သူမကို ချစ်လိမ့်မယ်။ ချစ်ပုံချစ်နည်းချင်းမတူကြတာပဲမမ။
သူမချစ်တာက တတိယကြယ်ပဲ။ တကယ်လို့ ပထမကြယ်ကိုသာ ချစ်ရင် ဒုတိယကြယ်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲလိုပဲ ဒုတိယကို တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ရင်လဲ တတိယကြယ်ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တတိယကြယ်ကို အချစ်ဆုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
(3)နံပတ်၂ ပဲ...မလွဲဘူး....အဲ့ဒါ အိန်ဂျယ်လေ။
(4)ဒီမေးခွန်းက ငါးအသေနဲ့ငါးအရှင် ဘယ်
အနားမှာရှိနေတဲ့ ကြယ်လေးက အချစ်ဆုံး ဘဲပေါ့ အမရယ်..
ကွန်မန့်တွေ ဖတ်အပြီး ကိုယ့်စိတ်နဲ့ထပ်တူကျတဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေ့သွားတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ သူမရဲ့လက်တွဲဖော်အဖြစ် တတိယကြယ်ကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..
ကဲ..သူမ ဘယ်က ကွန်မန့်ကို ကူးယူလိုက်ပါသလဲ.. ဖြေကြည့်ပါ.. :D
၁ ) အလိုလို ဖြစ်ခဲ့တာတွေ အတွက် ထင်စရာ မရှိပါ ။
၂ ) တတိယ တစ်ယောက် လို့ ထင်ပါ၏ ။
၃ ) ဒုတိယ တစ်ယောက် လို့ ထင်ပါ၏ ။
၄ ) ကိုယ် ချစ်တဲ့သူ ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဆို ဒုတိယ တစ်ယောက် ကို ရွေးချယ်သင့်ပြီးတော့ ... ကိုယ့် ကို ချစ်တဲ့သူ ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ဖို့ ဆိုရင်တော့ တတိယ တစ်ယောက် ကို ရွေးချယ်သင့်တယ် ထင်မိပါကြောင်း ... ။ :)
20 September 2013 at 02:08
၁- ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုမိန်းကလေးတိုင်းမှာရှိတာပဲနော့ အပြိုင်မှမဟုတ်တာ..
(၁) ကြယ်တစ်လုံးချင်း တွေ့ခဲ့တာဆိုရင် သူမ မျက်နှာမများပါ။
(၂) တတိယကြယ်က သူမကို အချစ်ဆုံး ( အမှန်တော့ ပထမကြယ် နဲ့ တတိယကြယ်ကို ပြောဖို့စဉ်းစားရခက်နေတယ် ၊ ပထမကြယ်က မွန်းကျပ်အောင် ချစ်တတ်တယ်ဆိုလို့) ။ ကြယ် ၂ လုံးလုံးလို့ပြောခွင့်ရှိမလား?
(၃) သူမက ဒုတိယကြယ်ကို အချစ်ဆုံး။
(၄) သူမ ရွေးချယ်လိုက်တာ တတိယကြယ်။